Halkan waxaa ah Lampard laacibkiisa muhiimka ah ee hoos u dhigaya Atlético - teles relay
Atlético de Madrid iyo Chelsea ayaa ku kulmi doona wareega XNUMX-ka ee Champions League. Mid ka mid ah dadkii salaamay natiijada isku aadka niyad xumada ugu macquulsan waa tababaraha xulka England Frank Lampard.
Tababaraha Ingriiska Franck Lampard wuxuu si cad u fahmayaa shaqada la doonayo in laga gudbo si loo gaaro ciribtirka Atlético. Si kastaba ha noqotee, isagoo wata koox aad u da 'yar oo cusbooneysiiyay, Lampard ayaa magacaabay mid ka mid ah ciyaartoydiisa isagoo ah barta uu ku xiran yahay. Furaha u oggolaan doona ciyaartoy kale inay wajahaan muran sida midkan oo kale. Frank Lampard ayaa aaminsan in Thiago Silva ay tahay inuu door muhiim ah ka ciyaaro hogaaminta.
"Aad ayuu muhiim u noqon doonaa kaligiisna ma ahan ”, ayuu yiri Lampard. “Ciyaartoyda kale waxay leeyihiin khibrad Champions League ah waxa ugu macquulsan tartanka kooxaha adduunka kubada cagta adduunka ”ayuu ku daray.
Isaga, tartankan “waxay u baahan tahay feejignaan iyo karti maxaa yeelay waa mid aad u daran". "Qaar baa hore u soo maray. Thiago wuxuu kabtan u ahaa final, waqti aan fogeyn, wuxuu awoodi doonaa inuu u soo gudbiyo khibradiisa isla markaana uu si aad ah uga warqabo heerarkaan labo kulan oo ay la ciyaarayaan koox khibrad u leh sida Atlético“, Wuu cadeeyay.
AtlantaCiyaaryahan muhiim ahLampard
Facebook ayaa shaaca ka qaaday "macluumaad been abuur ah oo laga helay Faransiiska iyo Ruushka"